पखेर जोड्ने निर्माणाधिन मोटरेबल पुल भासिन थाल्यो – धौलागिरी खबर
पखेर जोड्ने निर्माणाधिन मोटरेबल पुल भासिन थाल्यो
धौलागिरी खबर	 २०७८ माघ २०, बिहीबार १८:२९ गते मा प्रकाशित 384 0
भासिन थालेको पखेर स्थित म्याग्दी नदीमा निर्माणाधिन पुलको ढबिएको भाग देखाउदै स्थानीय । तस्बिर धौलागिरी खबर
तातोपानी, बेनी नगरपालिका–४ र मंगला गाउँपालिका–३ को सिमानामा पर्ने पखेर स्थित म्याग्दी नदीमा निर्माणाधिन पक्कि मोटरेबल पुल भासिन थालेको छ ।
११७ मिटर लामो र ११ मिटर चौडाई भएको पुलको पखेर तर्फको ३५ मिटर लामो स्पाम –भाग) यही माघ १८ गते मंगलबार ढलान भएको थियो । अन्य दुई वटा स्पामको ढलान ठिक भएपनि पछिल्लो पटक ढलान भएको स्पामको मध्य भागको दायाँ र बायाँतर्फ सतह भन्दा दुई इञ्च भन्दा बढी भासिएको पखेरका बासिन्दा धनबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
“ढलानको भार थाम्न नसकेर टेको लगाइएका फार्मा जमिनमा गाडिएपछि पुल भासिन थालेको हो,” उहाँले भन्नुभयो “सटिङ गर्दा टेकाहरु राख्ने क्रममा भएको लापरबाहीले ढलान दबेर भासिन थालेको छ ।”
बालुवा र सिमेन्ट घोलेर गहिरो देखिएको ठाउँमा हाल्ने क्रममा बुधबार स्थानीयबासीले रोकेका थिए । पुलको बिच भाग उठेको र छेउतर्फ गहिरो, खाडल परेको र भासिएर बाङ्गो देखिन थालेपछि गुणस्तर र दिगोपनामा शंका र प्रश्न उठेको बेनी नगरपालिका–४ तातोपानीका बिरेन्द्रमान शाक्यले बताउनुभयो ।
“भबिष्यमा पुलको उपभोगका क्रममा जोखिम, गुणस्तर र दिगोपनामा असर पर्ने नपर्ने बिषयमा प्राबिधिक अनुसन्धानका लागि सडक डिभिजन, जिल्ला प्रशासन र नगरपालिकामा अनुरोध गरेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “पुल बनेर मात्र भएन सुरक्षित रुपमा उपयोगयोग्य र गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”
निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर गोपालकुमार शाहले फुटपाथको भाग दबेर कुनै असर नपर्ने दाबी गर्दै अर्को ढलान गर्दा सतह मिलाउने बताउनुभयो । “ढलान गर्दागर्दै दबेको हुनाले त्यही अनुसार सेट हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो “फुटपाथ बनाउने क्रममा सतह मिलाउन सकिन्छ । गाडी गुड्ने भाग केही भएको छैन् ।”
ढलानका क्रममा उपस्थित भएका सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्राबिधिक तोपबहादुर थापाले पनि यो सामान्य बिषय भएको प्रतिक्रिया हुनुभयो । फुटपाथमा थप सात सेन्टिमिटर बाक्लो ढलान गर्ने क्रममा सतह मिलाउन सकिने उहाँको भनाई छ । सडक डिभिजनका इञ्जिनियर सहितको टोली बिहिबार पुलको निरिक्षणमा आएका थिए ।
मंगला गाउँपालिकाको ३, ४ र ५ नम्बर वडालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले पखेरका साथै बाबियाचौरको माटेबगर र पोक जोड्ने म्याग्दी नदी माथि ८० मिटर लामो पुल बनाउन बि.स. २०७५ पुषमा लुम्बिनी–प्राकृतिक जेभीसँग रु. २२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
२०७७ पुष २५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएपनि ठेकेदारले पर्याप्त मात्रामा उपकरण, मजदुर परिचालन गर्न, निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्नु, कोरोना भाइरसको महामारी र बाढीका कारण ढिलाई भएको छ ।
११ मिटर चौडाई भएको माटेबगर–अर्मन जोड्ने अर्को पुलको ४० मिटरको एउटा स्पाममा ढलान सकेको ठेकेदारले अर्मनतर्फको फिल्लर ठडाएर ढलानको तयारी गरेको छ । फापरखेत–पखेर जोड्ने पुलका चार वटै पिल्लर निर्माण र ढलान सकिएपनि दायाँबायाँ पहुचमार्ग बनाउन बाँकी छ ।